Virtual assistant ဆိုတာ … – How She Did It
Virtual assistant ဆိုတာ …
Posted December 16, 2020 Nang Ei Ei Mon
ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါ။ Virtual assistant ဆိုတာတကယ်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အရေးပါတဲ့ position တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Online ပေါ်က personal assistant ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ virtual assistant ရဲ့ အလုပ်တွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်။
Virtual assistant ကဘာတွေလုပ်ရလဲ?
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ virtual assistant တစ်ယောက်တော့ရှိသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Virtual Assistant တွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ လည်း ရှိကြပြီး Online Business တွေနဲ့အပြိုင်ခေတ်စားလာတာပါ။ Online ပေါ်ကနေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊မန်‌နေဂျာ
တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရုံးလုပ်ငန်းအပြင် တခြားအသေးစိတ် ကိစ္စတွေကိုပါ စီမံခန့်ခွဲပေးနေကြသူတွေပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုရှေ့ဆက်ပြီး ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်စရာ မလိုအောင် virtual assiatant တွေက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ Online ပေါ်မှာပဲ Digital Tools တွေနဲ့‌ နေ့စဉ်ဘဝမှာရော လုပ်ငန်းထဲမှာပါကူညီပေးနေကြသူ‌တွေပါ။
Virtual assistant တွေက ဘာတွေတာဝန်ယူလုပ်ပေးရမှာလဲ?
Virtual assistant တွေရဲ့ အဓိကလုပ်ပေးရတာတွေကတော့ အစည်းအဝေးအတွက် PowerPoint များကိုဖန်တီးပေးရပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(meeting minutes) ပြုလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးပြီး၊
ဖုန်းဆက်၍ အကြောင်းပြန်ပေးစရာများလည်းလုပ်ရပါတယ်။ email ပို့စရာတွေကို ပြန်စစ်ပေးရပါတယ်။ ငွေကြေး နဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဥ်တွေကိုတာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ ခရီးစဉ်အစီအစဉ်များ ကြိုတင်စာရင်းပေးစီစဉ်ပေးရပါတယ်။
အဲ့ဒီ့အပြင် အထက်လူကြီးရဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရညွန်ကြားချက် များကိုလည်း ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။
Virtual assistant တစ်ယောက်အနေနဲ့ လေ့လာထားသင့်တာတွေကတော့
✓ဘွဲ့တစ်ခုလောက်ရထားဖို့လိုအပ်ပေမယ့် ရုံးလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးရာ စသည်တို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အထောက်အထားလက်မှတ်တွေ ရယူထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
✓ online ကနေအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် digital tools တွေတော်တော်များများကို အကျွမ်းတဝင်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
✓တတ်ထားသင့်တဲ့ digital tools တွေကတော့ Google suite (cloud,drive,docs, etc…)
✓နောက်ထပ် digital tools အနေနဲ့က Microsoft နဲ့ဆိုင်တဲ့ (words, office, spreadsheets, etc…)
✓ဘာသာစကားအနေနဲ့က အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာထားရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် businesses English course လိုမျိုးစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေ ပိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
Virtual assistant တစ်ယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကက စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိရပါမယ်။ ရိုးသားရမယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ Customer ကိုကူညီဖို့ အသင့်ဖြစ်နေရမယ်။ အပြောအဆို လိမ္မာပါးနပ်မှု ရှိရပါမယ်။ သင်လွယ်တတ်လွယ်ပြီး အမြဲ active ဖြစ်နေရပါမယ်‌နော်။
⟵Video Editor …
Social Media Manager ….⟶